Barnaamijka cusub ee Google Advisors Business Advisor wuxuu higsanayaa inuu ka caawiyo SMB-yada inay koraan | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Barnaamijka cusub ee Google Advisors Business Advisors wuxuu hiigsanayaa inuu caawiyo SMB-yada
Barnaamijka cusub ee Google Advisors Business Advisors wuxuu hiigsanayaa inuu caawiyo SMB-yada
Google ayaa beta u furtay barnaamij ganacsiyada yar yar (SMBs) si ay uga caawiso inay noqdaan suuqgeyn wanaagsan Google. Waxa loogu yeeraa La-taliyayaasha Ganacsiga Yaryar (SBA), barnaamijku wuxuu bixiyaa 50-daqiiqo kulamo la-talin shaqsiyeed oo ku saabsan badeecado kala duwan oo ka yimid Google My Business ilaa xayeysiisyada iyo falanqaynta YouTube.
Ma jiro shirkado ama wakaalado. Google waxa uu iimaylka iigu sheegay in barnaamijku “u furan yahay ganacsiyada yaryar ee Maraykanka oo leh akoon Google-ka ah. Ganacsiyada waaweyn, suuq-geynta iyo wakaaladaha SEO uma qalmaan inay ka qaybqaataan." Qiimaha waa $39.99 fadhigiiba. Ma jiro wax lacag ah ilaa dhamaadka 2020.
Ganacsiga yaryar uma muuqdo mid la qeexay, markaa aragti ahaan shirkadaha leh ilaa 100 shaqaale ama xitaa 499 shaqaale ah (qeexidda Maamulka Ganacsiga Yaryar ee Maraykanka). Arrin la taaban karo ahaan, barnaamijka waxa ay u badan tahay in ay ka faa'iidaysan doonaan ganacsiyo yaryar oo leh shaqaale yar. Xisaabaadka la hakiyey uma qalmaan inay ballan qabsadaan waana in dib loo soo celiyo ka hor inta aan la helin barnaamijka.
Ha ugu yeedhin 'Google Care'. Markii ugu horreysay ee aan tan maqlay, waxaa maskaxdayda ku soo dhacay daryeelka Apple. Si kastaba ha ahaatee, shirkaddu waxay leedahay kani maaha nooca la xoojiyey ee taageerada Google - inkastoo qaar badan laga yaabo inay isku dayaan inay sidaas u arkaan. Taageerada, Google ayaa leh, waxaa loogu talagalay in lagu xalliyo dhibaatooyinka kala duwan, sida dib u soo celinta ama isku darka liisaska nuqul ka mid ah.
Google SBA waxaa loogu talagalay inay ka caawiso milkiilayaasha ganacsiga inay aad ugu yaqaaniin isticmaalka alaabta Google. La-taliyeyaashu waxay samayn doonaan "cilmi-baaris ballan-qaad ka hor si ay u yimaadaan oo ay uga faa'iidaystaan ​​ballantaada 50-daqiiqo ah."
Google wuxuu leeyahay SBA waxaa si gaar ah loogu talagalay milkiilayaasha ganacsiga kuwaas oo:
Dareen niyad jab ama hubanti la'aan ku saabsan joogitaanka internetka ee ganacsigaaga.
Hayso su'aalo horumarsan oo alaabta
Ha haysan khabiir ku takhasusay suuqgeynta khadka ama wakaalad suuqgeyn ka baxsan.
Weligaa ha isticmaalin alaabta Google.
Barnaamijka looma isticmaali karo xaqiijinta GMB ee wakhtiga-dhabta ah.
Iyada oo ku xidhan sahanka aad la tashato, meel kasta oo u dhaxaysa 60% ilaa 70% SMB-yada lama shaqeeyaan wakaaladaha suuq-geynta waxayna isku dayayaan inay maamulaan suuqgeynta dhijitaalka ah ee guriga.
Sheeko muuqaal ah iyo wadaagga shaashadda. Talooyinku waa la habayn doonaa waxaana lagu soo gudbin doonaa sheeko-fiidyow, kaas oo sidoo kale ku jiri kara wadaagista shaashadda. SMB-yada waxaa lagu dhiirigelinayaa inay "wadaagaan hadafkooda" ka hor intaanay la hadlin lataliye. La-taliyayaasha laftoodu waa shaqaale Google gudeed ah.
Google ayaa sheegay in SMBs ay filan karaan in laga wada hadlo laba badeeco ballankiiba. Taasi waxay dhalinaysaa su'aasha ah kulamo badan. Waxaan waydiiyay Google haddii ay qorsheynayaan xidhmooyin qiimo dhimis ah oo loogu talagalay dadka u baahan wax ka badan hal fadhi. "Ma jiraan wax qorshayaal ah oo soo socda oo loogu talagalay xirmo qiime ama isdiiwaangelin, laakiin waa wax aan sahamin karno mustaqbalka," afhayeen u hadlay Google ayaa yiri.
Sababta aan u danayno. Taageerada maxalliga ah ee Google ayaa taariikh ahaan lagu dhaleeceeyay tayada aan sinnayn. Barnaamijkani waxa uu u taagan yahay horumar la taaban karo oo loogu talagalay SMB-yada, kuwaas oo inta badan la siiyo macluumaadka suuq-geyneed ee aan sax ahayn ama dano gaar ah leh oo ay bixiyaan qolo saddexaad oo doonaysa inay ka iibiso alaabta. Hase yeeshee qiimaha barnaamijku wuxuu ugu dambeyntii ku xirnaan doonaa tayada lataliyayaasha laftooda iyo heerka khibradooda. Way degi doontaa ama way dabaalan doontaa.
Google inta badan waa " xishood" ku saabsan horumarinta alaabteeda iyo adeegyadeeda. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ka shakisanahay, si kastaba ha ahaatee, haddii shirkadu ay suuq geyso tan inay arki doonto baahida weyn ee milkiilayaasha ganacsiga maxaliga ah ee u baahan caawimaad iyo macluumaad.
Wax iibsiga tooska ah ee Instagram: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u bilowdo
Falanqaynta Ka-noqoshada La'aanta waxay kaydin kartaa barnaamijka suuq-geynta iimaylka